Arsenal oo markale Inter Milan waydiisatay Marcelo Brozovic laakiin jawaabta ay heshay…. – Gool FM
Arsenal oo markale Inter Milan waydiisatay Marcelo Brozovic laakiin jawaabta ay heshay….
(London) 24 Luulyo 2016. La Gazzetta dello Sport ayaa sheeganeysa in Arsenal ay markale waydiisatay naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga Marcelo Brozovic laakiin qiimaha la dul dhigay weli waa uun sidiisii 30-milyan oo bound.
Xiddiga qadka dhexe ee reer Croatia ee bandhiga cajiib ah ka sameeyay tartanka Euro ayaa diirada u saarnaa waqti naadiga ku ciyaarta Emirates ee Gunners.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay in Arsenal ay markale soo gaartay Inter si ay u waydiisato in la heli karo Brozovic.
Laakiin jawaabta ay heshay weli waa isla sidii, in Brozovic uu ku kici doono ugu yaraan 30-milyan oo euro, lacagtaas haddii aan miiska la soo saarina wada hadalo xitaa ma furi doonto kooxda reer Talyaani.
23-jirka ayaa Inter Milan kaga yimid dhanka Dinamo Zagreb bishii Janaayo 2015 adduun lacageed dhan 8-milyan oo qura, wuxuuna dhici doonaa heshiiska uu kula joogo Inter bisha June 2019.
Daaficii Barcelona ee Adriano oo gaaray Turkiga si uu ugu biiro Besiktas (SAWIRRO)